EVY's Kitchen: ချောကလက်သီးစုံကိတ် (Chocolate Fruit Cake)
အိမ်မာလည်း အဲ့လိုပဲ သူက
ကော်ဖီ တို့ ချောကလက်တို့မှ
ကျမ ကျပြန်တော့ ဗနီလာမှ
ရှေ့ တပတ်တော့ ဧည့်သည်ရှိလို့ မုန့် ဖုတ်ရအုံးမယ်။
looks very chocolaty.
tartar cream ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲဟင်.. ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဟင်..Cold Storageမှာ ၀ယ်လို့ရလားဟင်.. နောက်ပြီး Cookie Pressက ဘယ်မှာဝယ်တာလဲဟင်..Thanks in advance naw..
ဟီးဟီးး tartar cream ဆိုတာသိသွားပြီ.. Cookie pressဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ ပြောပြပါနော်.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..
ညီမရေ cookies press က ရပ်ကွက်က Hardware ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာလည်းရပါတယ်။ အဲဒီမှာ မုန့်ဖုတ်တဲ့ခွက်လေးတွေဘာတွေ ရောင်းတဲ့အတန်းမှာရှိပါတယ်။
မမရေ.. ချက်ခြင်းဖြေပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်...